ကျွန်တော်နှင့် တားေ၇ာ့ သင်ခန်းစာ---အောင်ကောင်းမွန်(လား၇ှိုး)
Aung Kung Mon
“စိန်တတင်း ဂျင်းတတက် အမှားတွေကိုဖျက်” အောင်ကောင်းမွန်(လားရှိုး)
၂၀၀၃-ခုနှစ်၏ နွေဦးကာလ မတ်လ၏ နေ့ရက်များမှာပင်ဖြစ်လေတော့၏။ ကျွန်ုပ်သည် မဟာကျေးဇူးရှင်ကြီးဖြစ်သော
အဘဒေါက်တာမင်းသိင်္ခနေထိုင်ရာ မှော်ဘီမြို့အစွန် မရမ်းတလင်းတောစပ်ရှိ အယူတော် မင်္ဂလာခြံဆီသို့
အဘထုလုပ်ထားသော ရုပ်ထုများစွာလည်းရှိ၏။ ဂမုန်းခြံကြီးတစ်ခုကိုလည်းတွေ့မြင်ရ၏။ ထိုဂမုန်းခြံ၏
နံဘေးတွင် လွန်စွာလှပသောတိုက်အိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်လုပ်ထား၏။ ထိုတိုက်အိမ်လေး၏ရှေ့တွင်
ရေကန်တစ်ခုရှိနေသေးတော့၏။ ထို့ကြောင့် ထိုအိမ်လေးသည် နေထိုင်ရသူအတွက် လွန်စွာစိတ်ချမ်းသာဖွယ်ရှိသည်ဟု
ကျွန်ုပ်တစ်ယောက်တည်း တွေးတောနေမိ၏။ ထိုအချိန်၌မှာပင် ထိုအိမ်လေးအတွင်းဆီမှ လွန်စွာတည်ကြည်ခံ့ညားပြီး
သံလိုက်ဓါတ်များ လှိုင်းလုံးထ၍ထွက်လာသကဲ့သို့ထင်မှတ်ရသည့် ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
လားရှိုးမြို့စွန် ရန်တိုင်းအောင်ဆုတောင်ပြည့်ဘုရားအနီး ရွှေလီရတနာရပ် ကျွန်ုပ်၏နေအိမ်သို့
အသက်(၅၀)အရွယ်ခန့်ရှိသော အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးသည် အလည်အပတ်ရောက်ရှိလာလေ၏။
၄င်း၏အမည်ကား“ဒေါ်အုန်းမြင့်”ဟူ၍ပင်ဖြစ်၏။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တပည့်တဦးအားအလုပ်တခုခိုင်းကာအလွှဲလွဲအချော်ချော် ပင်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်လွန်စွာမှပင်ဒေါသထွက်၍ထိုတပည့်ဖြစ် သူအားကြိမ်းဝါးပြောဆိုနေမိ၏။သို့ပါသော်လည်းဒေါ်အုန်းမြင့်
အားမြင်လျှင်အနည်းငယ်စိတ်ထိန်းရတော့၏။ထို့နောက်တွင်ဧည့်သည်ဖြစ်သူဒေါ်အုန်းမြင့်အားဧည့်ခံ စကားဆို၏။ ၄င်းဒေါ်အုန်းမြင့်သည်ယခင်ကျွန်ုပ်ထံသို့မကြာခဏရောက်ရှိလေ့ရှိသော ဧည့်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်သော်ငြားလည်း လတ်တလောတွင် မလာသည်မှာ အတော်ပင်ကြာလေပြီဖြစ်၏။
ခင်မင်ရင်းနှီးမှုအား အကြောင်းပြု၍ လွန်လေပြီးသော အချိန်ဆယ်စုနှစ်များဆီသို့ မသိမသာတွေးမိလေ၏။ ထိုသို့တွေးရင်းပင်စောစောကထွက်နေသောဒေါသများလည်းပြေသွားလေတော့၏။
စူးစိုက်စွာကြည့်မြင်လေသော ဒေါ်အုန်းမြင့်မှာ -
“မောင်ဝေလင်း . . . မင်းဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ထိ
. . အောင်ကောင်းမွန်(လားရှိုး)
မဟုတ်တော့လို့လား . . . ဒါမှမဟုတ် လင်းလင်း(လားရှိုး)
အထက်ပါ အဆောင်ကို နံ့သာဖြူ ဆွတ်ဖြန်း၍ ဖြစ်စေ ၊ သို့မဟုတ် မပြင်း လွန်းသော အမွေး နံ့သာဖြင့် ဆွတ်ဖြန်း၍ ဖြစ်စေ ဆောင်ပါက လာဘ်လာဘ အရာတွင် ကောင်း၏။
ဟောဒီ အဆောင်ကလေးကတော့ ပီယ အဆောင်ပါပဲ။ ဆောင်ရုံ သက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။
ဖယောင်းတိုင်မှာ ပတ်။ မီးထွန်းပြီး ကိုယ်ရည်ရွယ်တဲ့ သူကို မေတ္တာပို့ရင်တော့ ထူးခြားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်
၀ါစိမ်းနီ ဘုရားထုလုပ်ကိုးကွယ်နည်း အသေးစိပ်
ဧ၀ံ အစိန္တိယာ ဗုဒ္ဓါ ၊ ဗုဒ္ဓ ဂုဏာ အစိန္တိယာ အစိန္တိယေ ပသန္နနံ ၊ ၀ိပါကော ဟောတု မမ အစိန္တိယော။ အင်းဝခေတ်တွင်ဖြစ်၏။ အင်းဝဘုရင်သည် ဗားမဲ့ဆရာတော်ကို လွန်စွာယုံကြည် ကိုးကွယ်၏။ ထိုအတူ နန်းတွင်းသူ နန်းတွင်းသား မင်းညီမင်းသား ၀န်ကြီးဝန်ကလေး ၊ အမတ် ၊ ကလန် ၊ သံပျင်မှအစ တိုင်းသူပြည်သား ဆင်းရဲသား မိလက္ခူ တို့ပါမကျန် ဆရာတော်အား ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
(မနောမယထမင်းဝိုင်း)“အုန်းသီးထဲကို ကြက်သားထည့်၍ ဖွဲမီးဖြင့်ဖုတ်သော ဟင်းတစ်မျိုး”မင်းသိင်္ခ
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာ မှော်ဘီမြို့အစွန်းမရမ်းတလင်းတောစပ်ရှိ အယူတော်မင်္ဂလာခြံသို့ ကျွန်ုပ်တို့ ငယ်စဉ်က တစ်ရပ်တည်းနေခဲ့ဖူးသော ကိုပီတာဆိုသော လူကြီးတစ်ဦး ရောက်လာလေ၏။ ထိုလူကြီးသည် ကျွန်ုပ်ကို လွန်စွာခင်မင်၏။ ကျွန်ုပ်ကို တွေ့လျှင် တွေ့ချင်း ထိုလူကြီးက .. “ ဟေ့… အောင်ထွန်း၊ဂွတ်ဒ်မော နင်း၊ဂွတ်ဒ်နိုက်..” ဟု နှုတ်ဆက်လိုက်လေ၏။ “ကိုပီကြီးကတော့ လုပ်ပြီး ဂွတ်ဒ်မောနင်းဆိုလည်း ဂွတ်ဒ်မော နင်းပေါ့မောနင်းပေါံ၊ ဂွတ်ဒ်နိုက်ဆိုလည်း ဂွတ်နိုက်ပေါ့ဗျာ” ဟု ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်ရာ ၎င်းက.. “ မနေ့ညက တည်းက ကိုယ့်လူဆီလာဖို့ စိတ်ရောက်နေတာ၊ အဲဒါကြောင့် ဂွတ်ဒ်နိုက်လို့ပြောတာ၊ ရောက်လာတာက ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
Sun Moon မုန့်တိုက်နှင့် အအေး (လားရှိုး)
သင်၏အင်္ဂလိပ်မွေးသက္ကရာဇ်တွင် (1)ဂဏန်း ၁ လုံးပါသူများ။ အရေးထက် အပြောပိုကောင်း၏ ။ သူတစ်ပါး၏ အမြင်ကို ဂရုမစိုက်တတ်။ စကားအလွန်သွက်၏ ။ ဤ သူမျိုး၏ ...
အဘမင်းသိင်္ခ၏ သွေးထွက်အောင် မှန်သည်ဆိုသောဗေဒင်(မင်းသိင်္ခ) ----မင်းသိင်္ခ
တွက်နည်းလေးကလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ ပထမ ( A ) ဆိုတဲ့ အကွက်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အသက်ကို အတိအကျရေးရ မယ်။ အပေါ်က (B ) ဆိုတဲ့ အကွက်မှာတော့ ရောက်ဆဲ သက္ကရာဇ်က...
လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို ချစ်ခွင့်ပန်လာပြီဆို ဒီလူ ငါ့ကိုတကယ်ချစ်လို့လား၊ အပျော်တွဲမှာလား၊ စဉ်းစားပေးရင်ကောင်းမလား၊ ပြန်ချစ်သင့်လား၊ ပြန်မချစ်သ...
အပျိုလေး အပျိုကြီးတွေအတွက် ဘ၀လက်တွဲဖော်(နှင်းအိဝေ)
မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဆန်း နည်းလေးပါ။ မိန်းခလေးတွေအတွက် သီးသန့်ပါ။ အရွယ်ရောက်တဲ့ မိန်းခလေးတွေက အစ အရွယ်လွန် အပျိုကြီးတွေ တခါတရံ တခုလပ် အိမ်ထောင်ပျ...
ကျွန်တော်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကဗေဒင်လက္ခဏာပညာ၇ပ်တွေကိုယ်အလွန်ကိုဘဲဝါသနာကြီးခဲ့သူပါ။ လူ၇ယ်လို့ကောင်းစွာသိလို့စာဖတ်တတ်စအ၇ွယ်ကတည်းကဗေဒင်စာအုပ်တွေတွေ့ ...
ကိုးန၀င်း မိုးလင်းမှသိမယ် အဓိဋ္ဌာန်(မင်းသိင်္ခ)
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာ မှော်ဘီမြို့အစွန် မရမ်းတလင်း တောစပ်ရှိ ကျွန်ုပ် နေထိုင်သော အယူတော် မင်္ဂလာခြံသို့ ရောင်ပြန်မဂ္ဂဇင်း၏ အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ...
မြန်မာ့ မိုးလေ၀သ နှင့် ဇလဗေဒ
<!-local time clock widget - html code - localtimes.info --> Yangon (Rangoon) Time<!-end of code-->
<!-my calendar widget - html code - mycalendar.org -->Budhist Calendar<!-end of code-->
ကျွန်တော်နှင့် တားေ၇ာ့ သင်ခန်းစာ---အောင်ကောင်းမွန်...
Aung Kung Mon Blog. Powered by Blogger.